नेपाली दूतावासबाटै मानव तस्करी ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
नेपाली दूतावासबाटै मानव तस्करी !
काठमाडौं । ठूलो खर्च गराएर नक्कली कागजातका आधारमा यूएई ल्याउने धन्दामा नेपाली दूतावाससमेत सामेल भएको पाइएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गरेको अनुसन्धानमा सयौं यस्ता डकुमेन्ट भेटिएका छन्, जसमा प्रविधिको प्रयोग गरी भिजिट भिसालाई रोजगार भिसा बनाइएको छ। र, त्यसमा दूतावासले साथ दिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले समाचार छापेको छ ।
यस्तै खाले नक्कली रोजगार भिसामा श्रम स्वीकृति लिएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै दुबई आएका निग्मा शेर्पाले यहाँ आएपछि ठगिएको थाहा पाए। तुरुन्त फिर्ता गर्न कडा कुरा गरे। उनलाई नेपाल पठाइयो। त्यति मात्र होइन, उक्त सेटिङबाट यूएई पठाउने एपोलो ओभरसिज सर्भिसेज म्यानपावरले गत वैशाख ७ गते ३ लाख ५० हजार रूपैयाँ फिर्ता गरिदियो। त्यसको कागज पनि ग-यो।